कुवेत सिटी (कुवेत) - अमीर र सबै भन्दा विकसित को एक को राजधानी छ मध्य पूर्व मा, उत्तर-पश्चिम र समवर्ती एक महत्वपूर्ण पोर्ट फारसी खाडी को। कुवेत को राजधानी गहिरो-पानी बंदरगाह को दक्षिणी तट मा स्थित - कुवेत खाडी। शहर मा नुन पोखरी, को वर्षा पछि पानी भरिएका हुन्छन् जो धेरै। कुवेत कुनै ताजा पानी भएकोले पीने औद्योगिक desalination द्वारा सिर्जना गरियो।
कुवेत सिटी राज्य मा सबै भन्दा ठूलो शहर हो। जनसंख्याको आधा आदिवासी मान्छे हो, र अन्य आधा - भारतीयहरुलाई, ईरानी, पाकिस्तानी, लेबनानी, अमेरिका र यूरोप। मुख्यतया Sunni मुसलमान, तर त्यहाँ मसीहीहरू र अन्य धर्म पनि हो। मुद्रा कुवेत - कुवैती दिनार, आधिकारिक भाषा - अरबी।
कुवेत को सुविधाजनक स्थान बन्दोबस्त एक लामो समय को लागि यस ठाउँमा गठन भएको थियो सुझाव। व्यापार मार्गहरू को व्यस्त Crossroads, सधैं विजयी को ध्यान आकर्षित गरेको छ, त्यसैले सुरुमा इलाका भाग थियो अरब खलीफा, तुर्क साम्राज्य र त्यसपछि। को xvi शताब्दीमा कहीं, एउटा सानो गाउँ, माझिहरु र मोती Divers बस्ने स्थापित। 1889 देखि 1961 को लागि, इलाका ग्रेट ब्रिटेन प्रशासित, तर कुवेत पछि स्वतन्त्रता घोषणा गरे।
कुवेत को राजधानी आर्थिक को खोज पछि तीव्र गतिमा विकास गर्न थाले oilfields। यो धन तुरुन्तै अंग्रेजी र अमेरिकी व्यवसायी को ध्यान आकर्षित भएको छ। सरकार र स्थानीय कुलीन वर्गहरु अनुरूप गर्नुभएको छैन, र यसैले देश बाहिर लाभ, अधिकांश राज्य को स्वतन्त्रता घोषणा भएको थियो। कुवेत धेरै शासक लागि लालच छ, त्यसैले उहाँले 1990 मा दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा नाजी जर्मनी, र इराक पक्रन चाहन्थे।
आज कुवेत को राजधानी हरियो पार्क र चौडा सडकहरू एक सुन्दर आधुनिक शहर हो। , व्यावसायिक शैक्षिक र मनोरञ्जनात्मक, अल-Jawhar को शहर गर्न प्रमुख तटीय सडक साथ स्थित उत्तरार्द्ध र पर्यटकहरु पहिलो वर्ग छुट्टी दिने: कुवेत तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
कुवेत पनि ठूलो सांस्कृतिक महत्त्व छ। यहाँ राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, धेरै पुस्तकालयहरु र संग्रहालयहरु छ। विगतमा, तपाईं archeological र एथ्नोग्राफिक संग्रह थाह प्राप्त, स्थानीय कारीगरों को उत्पादनहरु मा हेर्न सक्छन्। यो पनि राजधानी गरेको थिएटर को एक जान रोचक हुनेछ। अन्य कुराहरु, कुवेत सिटी पनि संसारको धेरै देशका वैज्ञानिकहरू को खण्ड अन्तर्गत संकलित। त्यहाँ कृषि विज्ञान मा बाहिर अनुसन्धान कार्य, पेट्रोलियम भू-, देश र समुद्री जीवविज्ञान को अर्थव्यवस्था छन्। मन्त्रीहरु को परिषद कुवेत को इतिहास को अध्ययन गर्न समर्पित एक समूह छ।
ऐतिहासिक साइटहरु त्यहाँ, सानो सबै पुरातन स्मारक मात्र ग्रीक मन्दिरको भग्नावशेष संरक्षित चतुर्थ शताब्दीमा लगभग निर्माण को छ। यसलाई कुवेत मा मूल्यहरु एकदम उच्च हो कि उल्लेख गर्नुपर्छ, तर अझै पनि पर्यटकहरु यो देश आकर्षित गर्छ। यहाँ तपाईँले मात्र एक धेरै महंगा छैन रहन सक्छ, तर होटल, विशाल किनमेल परिसर मार्फत हिड्ने सस्तो सामान भेटी, साथै राजधानी को पार्क जटिल मा आराम।
के सेन्ट पीटर्सबर्ग मा पहिलो स्थानमा हेर्न
Paracas Candelabra: विवरण र फोटो
मलेशिया: रिसोर्ट्स र आकर्षण को फोटो
युक्रेनी भियना: Lviv आकर्षण
Mytishchi: फोटो र विवरण संग शहरको आकर्षण
इरानको शीर्ष आकर्षण प्राकृतिक र मानव निर्मित
सम्पर्क, atropicheskie, एलर्जी dermatitis: लक्षण र उपचार
एक शौक रूपमा सङ्कलन। त्यो मान्छे सङ्कलन?
दुर्गन्ध "शुद्ध रेखा": समीक्षा र संरचना
आत्म-शिक्षा - यो एक भन्दा बढी कठिन कामको
तेर्सो ब्लाइन्डहरू कसरी धुन: सुझाव पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री अनुभव
राजनीतिक कट्टरवाद: खतरा वा विकास?
Orcs को बारे मा खेल, ध्यान को योग्य
Toby "Naruto।" जसमा श्रृंखला Tobi unmasked। फोटो
को "स्काइप मा" मा एक व्यक्ति कसरी पाउन? सर्फ निर्देशन